Man United ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Barcelona Ousmane Dembele
Home Horyaalka Ingiriiska Man United ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Barcelona Ousmane Dembele
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay amaah kula soo wareegto bisha Janaayo garabka xidiga kooxda Barcelona Ousmane Dembele.
Kooxda heysata 20-ka jeer ee heysata horyaalka Ingariiska ayaa si aad ah loola xiriirinayay ciyaaryahanka reer France xagaaygii hore, si kastaba ha ahaatee ma aysan awoodin inay heshiis cusub la galaan kooxda Ronald Koeman ka hor inta uusan xirmin daaqadda suuqa kala iibsiga.
23 jirkaan reer France ayaa si joogta ah ugu ciyaarayay kooxda reer Catalan ololahan, isagoo dhaliyay seddex gool isla markaana caawiye ka ahaay sagaal kulan oo tartamada oo dhan ah, si kastaba ha ahaatee, ku guuleystaha Koobka Adduunka mustaqbalkiisa dheer ee kooxda reer Spain ayaa hawada ku jira lagana yaabo in oo ka tago kooxdiisa.
Qandaraaska haatan Dembele ee kooxda culus ee La Liga ayaa dhacaya June 2022, kooxda heysata horyaalka Serie A, Juventus ayaa la rumeysan yahay inay isha ku heyso horumarka ku xeeran weeraryahanka reer France.
Sida laga soo xigtay suxufiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano, Red Devils ayaan xiiseyneynin inay si joogta ah ula saxiixato xiddiga reer France bisha Janaayo, si kastaba ha ahaatee, waxay isku dayi doonaan inay amaah ku siiyaan inta ka harsan xilli ciyaareedka 2020/21 iyagoo ikhtiyaar u leh inay heshiiskiisa ka dhigaan mid joogto ah xagaayga soo aadan. .
Dembele ayaa inta badan la dhibtoonayay dhaawacyo tan iyo markii uu yimid Nou Camp, si kastaba ha ahaatee wuxuu haatan ku lug lahaa Barca shantii kulan ee ugu dambeysay La Liga, isagoo ciyaaray 90 daqiiqo oo buuxda kulankii Atletico Madrid horaantii usbuucii hore.
Previous articleMan United oo aqbashay inay iska iibiso ciyaaryahan Paul Pogba
Next articleArsenal oo qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Istanbul Basaksehir